Netflix တွင်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်: Kranks နှင့်အတူခရစ်စမတ်သည်၎င်းစာရင်းတွင်ပါဝင်သည် - ဟာသ
Netflix 2016 တွင်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်: Kranks နှင့်အတူခရစ်စမတ်သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည်
နယူးယောက် - နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်။ ။ ။ (LR)၊ မင်းသမီးဂျေမီလီ Curtis၊ Tim Allen၊ Revolution Studio မှ Joe Roth၊ Erik Per Sullivan၊ နယူးယောက်စီးတီး၌တည်၏။ (Evan Agostini / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Dave Chappelle သည် Netflix သို့ထူးခြားသောအသစ် ၃ ခုနှင့်လာသည် Netflix နှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀: လူသတ်သမား၏ Brendan Dassey ကိုထောင်ထဲမှာနေဆဲဖြစ်သည်
Kranks နှင့်အတူခရစ်ခရစ် Tim Tim Allem နှင့် Jamie Lee Curtis တို့သည် Netflix 2016 ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါဝင်သည်။
Kranks နှင့်အတူခရစ်စမတ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သငျသညျယနေ့ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်ရှာနေလျှင်, ငါတို့သည် Netflix တွင်ဤရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
အဆိုပါရုပ်ရှင်ဂျွန် Grisham ရဲ့ဝတ္ထုအပေါ်အခြေခံသည် ခရစ်စမတ်ကျော်သွား ခရစ်ကိုလံဘတ်စ်ကဒီဇာတ်ကားအတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးခဲ့တယ်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံတွင်ပြသခဲ့သည်။
Tim Allen ဒီဇာတ်ကားမှာဂျေမီ Lee Curtis၊ ဒန်အိုက်ကရွတ်၊ အီရစ် Per ဆာလီဗန်၊ Cheech Marin၊ Jake Busey နဲ့အမ်မမ်ဝမ်ရှ်တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
In Kranks နှင့်အတူခရစ်စမတ်, Luther နှင့် Nora Krank (Tim Allen နှင့် Jamie Lee Curtis) တို့သည်ယခုနှစ်အားလပ်ရက်မှအနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသူတို့၏သမီးသည်ခရစ်စမတ်အတွက်အိမ်ပြန်မလာသောကြောင့်ကာရစ်ဘီယံသင်္ဘောဖြင့်သွားရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူတို့အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအကောင်းဆုံးအလှဆင်ဆုအနိုင်ရမယ့်အရူးရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သောကြောင့်, ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်တွင်ပါဝင်ရန်မ Krank ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ဒရာမာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဖတ်ရမည်Netflix 2016 တွင်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်
သော်လည်း Kranks နှင့်အတူခရစ်စမတ် ဝေဖန်သူများ၏အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ခိုင်မာသောခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။ Tim Allen နှင့် Jamie Lee Curtis တို့၏အဓိကအခန်းကဏ္inတွင်ပါဝင်ခြင်းမှဟာသဇာတ်ကားများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အပြင်အခြားသရုပ်ဆောင်များသည်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒန်အိုက်ကိုသည်အမြဲတမ်းကြီးကျယ်ပြီး Cheech Marin ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
Kranks နှင့်အတူခရစ်စမတ် ဒီအားလပ်ရက်ရာသီကိုမိသားစုနှင့်အတူကြည့်ရှုရန်အလွန်ကြီးစွာသောရုပ်ရှင်ပါ!
ကျနော်တို့အောက်ကရုပ်ရှင်များအတွက်နောက်တွဲ shared! ယခုကြည့်ပြီး Netflix တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ။
Netflix 2016 ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်ရှု။ streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုရန် ပို၍ ကြီးသောခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုပါ။
သင်အွန်လိုင်းတစ်ရာသီ4နာရီကြည့်ပါ
နိုငျငံတျောသညျရာသီ2Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
အဟောင်းကိုကိုယ်ရံတော်2ရှိရလိမ့်မည်
အခါ netflix မှလာမယ့်မြှားရာသီ3ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါ flash ကို Netflix အပေါ်ပြန်လာပါဘူးသည့်အခါ